Jubbaland Cusub oo August ‘la dhisayo’ | Somsoon
Home WARAR Jubbaland Cusub oo August ‘la dhisayo’
Jubbaland Cusub oo August ‘la dhisayo’
Maamulka gobolka Gedo ee taabacsan Villa Somalia ayaa shaaca ka qaaday inay maamul cusub u dhisayaan Jubaland marka la gaaray bisha 8-aad ee soo socota, tani oo muujineysa in xiisadda gooblka Gedo ay weli sideeda u taagan tahay.
Axmed Buule ayaa u muuqda inuu tixraacayo qoraal 14-kii July 2020 kasoo baxay dowladda federaalka, oo ay ku sheegtay inay Axmed Madoobe ugu aqoonsatay madaxweynaha ku-meel gaarka ah ee Jubaland, muddo laba sano ah oo ka billaabaneysay bishii August 2019, oo aheyd markii la doortay.
Axmed Madoobe ayaa ku gacan seeray qoraalkaas kasoo baxay Villa Somalia, isla maalinkii ay soo saartay, kuna tilmaamay mid sharci-darro ah, mana cadda sida hadda loogu dabaqi karo.
Arrinta gobolka Gedo ayaa ka mid ahayd waxyaabaha heshiiska laga gaari waayay si Soomaaliya ay uga dhacdo doorashada xilligeeda ka dib dhacday, sida ay ku doodeen siyaasiyiinta mucaaradka iyo madaxda maamullada Puntland iyo Jubaland.
Degmooyinka Gobolka Gedo – marka laga reebo degmada Ceelwaaq – dhamaan inta kale waxay hadda hoostagaan Dowlada Federaalka
Article horeDFS oo tababar dibadeed u qaaday cutubkii ugu horreeyey oo gabdho Ciidan Ah
Article socoda Gudoonka gudiga doorashada Gobolada Waqooyiya Oo Is Jiid Jiid galay